Sweden: Xayiraad safar lagu soo rogay gabar 16 jir guur loo waday - NorSom News
Sweden: Xayiraad safar lagu soo rogay gabar 16 jir guur loo waday
Gabar 16 jir ah oo ku dhaqan gobolka Skåne ee dalka SWEDEN ayaa lagu soo rogay xayiraad dhanka safarka ah, kadib markii hay’addaha dowlada ay ka shakiyeen in loo wado guur nin qaraabadeed ah oo ku nool dal ka baxsan waddammada Yurub.
Go’aanka xayiritaanka safarka gabadha 16-jirka ah ayaa loo adeegsaday xeer dhawaan dalka Sweden laga dhaqan galiyay, kaas magaciisa loo soo qaabiyo LVU ama kahortaga gudniinka, guurka qasabka iyo danbiyada kale ee la xiriira. Waana markii ugu horreeysay kadib intii xeerkan cusub la sameeyay oo qof loo adeegsaday.
Sharcigan ayaa hay’adda adeegga Bulshada ee dalkaas, awood u siinaya in waalidiinta safarka laga baajin karo si qasab ah, ayna kala wareegi karto xanaanada ilmaha, xitaa waalidkana loo maxkadeyn karo, hadii la tuhmo in ilmaha loo wado guur qorsheysan ama gudniin.
Xigasho/kilde: Sveriges radio
Previous articleKhuburo: Waalidiin ayaa sababtan darteed si qaldan loo xukumay.
Next articleDowlada Norway: 3000 Qoxooti ah ayaan dalkeena keeni doonaa.